Indawo Yokugcina | I-China Abenzi Bokugcina, Abahlinzeki
Ibhokisi lokudonsa elenziwe ngokugoqeka 58L LJ-1998
I-LONGSTAR ibhokisi lokudonsa lokugoqeka elisongekayo, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eliqinile. Ngomklamo wesondo, kulula kakhulu kuwe! Uma kunesidingo sokuyihambisa, asikho isidingo sokuyiphakamisa, vele uyihambise kulungile; Ngomklamo wenduku, kulula kakhulu; Okubaluleke kakhulu ukuthi iyasonga, uma ungayisebenzisi, vele uyigoqe kulungile, yonga isikhala esiningi; Isebenziseka ngempela ekuthengeni, ekuphatheni izimpahla, futhi ingahlala kuwo, ilusizo ngempela futhi ilula empilweni yethu yansuku zonke.
4 izingqimba ibhokisi lokugcina (S) LJ-1662
ILONGSTAR ibhokisi lesitoreji, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Ngezendlalelo ezi-4 nokuklanywa kwamakhabethe, lokhu kugcina okuhlukile kungaba ngcono, kuyasiza impela empilweni yansuku zonke.
Ibhokisi lokugcina elisongekayo 40L LJ-1997
ILONGSTAR ibhokisi lokugoqeka elisongekayo, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Ingagcina kahle, yenqabe ukungcola; Ngomklamo wesembozo, ungagwema ukungcola; Futhi ngomklamo wesibambo, iyaphatheka kuwe! Okubaluleke kakhulu ukuthi iyasonga, uma ungayisebenzisi, vele uyigoqe kulungile, yonga isikhala esiningi; Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile.
4 izingqimba ibhokisi lokugcina (M) LJ-1663
Isitoreji ibhokisi (L) LJ-1603
ILONGSTAR ibhokisi lesitoreji, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Ingagcina kahle, yenqabe ukungcola; Ngomklamo wesembozo, ungagwema ukungcola; Ngamandla aphezulu, ilusizo impela empilweni yansuku zonke.
4 izingqimba ibhokisi lokugcina (L) LJ-1665
Isitoreji ibhokisi (M) LJ-1605
4 izingqimba isitoreji ibhokisi (XL) LJ-1666
Isitoreji (S) LJ-1606
Square isitoreji ibhokisi nge lid LJ-1615
ILONGSTAR ibhokisi lesitoreji, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Ingagcina kahle, yenqabe ukungcola; Ngomklamo wesembozo, ungagwema ukungcola; Ngaleli bhasikidi lesitoreji esincane nesitayela, ikhaya lizoba lihle futhi lihlanzeke.
Ideskithophu yokugcina ibhokisi LJ-1618
ILONGSTAR ibhokisi ledeskithophu ledeskithophu, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Ingagcina kahle, ideski elinqatshiwe lingangcolisi; Ngaleli bhokisi lokugcina elincane futhi elisesitayeleni, lizoba lihle futhi lihlanzeke.
Amatebhe izicubu ibhokisi LJ-1625
ILONGSTAR ibhokisi lezicubu elenziwa ngemisebenzi eminingi, lenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu, ezihlala isikhathi eside. Ingagcina kahle, ingaba nebhokisi lesitoreji ngakwesobunxele, kuthi elakwesokudla libe njengebhokisi lezicubu, ilusizo impela endaweni yokuhlala; Ngalokhu, kuzoba kuhlanzekile futhi kuhlanzeke.